Ny orinasany aloha -
AccueilTresakaNy orinasany aloha
31/03/2017 admintriatra Tresaka 0
Tsy nisy tsy nitabataba noho ny hamaroan’ny lavadavaka manerana ny araben’Antananarivo Renivohitra ny mpampiasa lalana. Vao miresaka hoe Antananarivo Renivohitra dia ny Cua no tompon’antoka ny fanamboarana an’izany. Ny eny 67 ha moa no tena lasibatra amin’izany ary manaraka azy ny eny amin’ny boriborintany fahadimy iny.
Sorena mihitsy ny mpandeha rehefa mitontona tampoka ny fiarany. Raha misy olona bevohoka aza, atahorana ho afa-jaza. Ny hetra anefa aloa ho an’ny Cua ihany. Ny « lanterin’ny taxi » ovaina isaka izay mahatsiaro…vola daholo izany. Notazanin’ny Cua fotsiny izany nandritry ny amam-bolana maro. Natao ihany izao karazana antso avo izao fa tsy nisy valiny. Navelany ho potika teo izay potika. Lasa ramatoa ben’ny tanàna nibalady tany Paris sy Danemark niaraka tamin’ny vadiny. Rehefa tsy mandeha manao « shopping » dia manangana ady amin’ny raharaha hafa toa ny nataony teny Andohatapenaka sy Antanimbarinandriana.
Rehefa niakatra Fitsarana anefa ilay raharaha Andohatapenaka dia nazava be fa resy teo anatrehan’ny Fitsarana ny Cua. Izany rehetra izany dia midika fa manana ny rariny mihitsy ilay nitory azy.
Lasa mihitsy ny eritreritra manao hoe: inona fotsiny izany no hataon-dRamatoa ben’ny tanàna no lavaka kely eran’ny arabe ireny aza tsy vitany ara-potoana ny manentsina azy ? Diso fanantenana mihitsy aloha ny olona nifidy azy e! Tsy nety tanteraka mihitsy ireo fampanantenana nataony. Lavaka kely eran’ny araben’Antananarivo aza tsy vitany, ka inona moa no fampanantenana andrandraina aminy eo.
Efa tena tofoka sy leo amin’ity tsy firaharahiana ny fotodrafitrasa tokony hataon’ny Cua ity ny vahoaka. Na ireo mpomba ny zanak’i Dada aza, zara raha tonga tetsy amin’ny Magro ny 29 Marsa teo. Taitra ny olona tsy mba taitra ka izao vao mody manamboamboatra ny lavadavaka eny 67 ha. Efa potika ihany izay potika…Tsy hanompo vahoaka tokoa angamba no nahatongavany teo fa hamerina tsikelikely ny orinasany. Ny orinasany anefa, tao anatin’ny indray mipy maso dia efa tafaverina tsikelikely amin’ny laoniny. Tsy miandry hanaovana antso avo tahaka ny mahazo ny vahoaka mpampiasa lalana. Raha ho an’ny vahoaka nifidy azy dia « tsisy réseau » fa raha ho an’ny orinasany aloha dia laharam-pahamehana.
Feno 10 taona ny kliobana basikety Andraisoro Tia Basket-ball na AT2B tarihin’ny filohany, Fanja Rabenjamina sy ny mpandrindra ankapobeny, Pascal Rasaony. Noho izay indrindra, dia amin’ny alalan’ny hetsika izay nahafantarana azy ireo hatramin’izay no hankalazana ...Tohiny